March 2016 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Ko Lin at 8:50:00 PM 0
Facebook မှာ ပျောက်ဆုံးသွားသော Massages, Photo, Video , ဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာ ရယူနည်း (ကွန်ပျူတာ)
Ko Lin at 8:47:00 PM 0
ဒီနေ့တော့ တောင်းဆိုထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Facebook မှာ ပျောက်ဆုံးသွားသော Massages, Photo, Video , ဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာ ရယူနည်း လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Facebook မှာ Facebook မှာ ပျောက်ဆုံးသွားသော Massages, Photo, Video , ဖိုင်တွေကို တွေကို ပြန်ရှာကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပ်ါမှာ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပြန်ရှာနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်
1.Account > Settings ကို သွားပါ။
2.General Account Settings ရဲ့ ဘောက်လေးမှာ DownloadaCopy ဆိုတာကို ကလစ်ပါ
3.ပီးရင်တော့ Start My Archive ဆိုတာကို ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
4. ဒီမှာလည်း Start My Archive ကိုဘဲ ပြန်ကလစ်ပါ
5. Okay ဆိုတာကို ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
6.Facebook အသုံးပြုနေတဲ့ Email. သို့ ဒေါင်းလုပ်ဖို့ အတွက် သင့် Email. သို့ Mess ပို့ပါလိမ့်မယ်။
7. ဒီမှာတော့ Ready ဖြစ်ဖို့ အတွက် အချိန် အနည်းမျှ စောင့်ပေးပါ
ခဏအကြာမှာ Your Facebook Download is ready ဆိုတဲ့ သင့် Email မှာ Mess
8. အဲ့ဒီမှာ Your Facebook Download is ready ဆိုတဲ့စာတန်း Mess ကိုလစ်ပြီး ပြပေးထားတဲ့
9. Download Archive ကို နှိပ်ပြီး
10. Facebook Password ကို ထည့်ပြီး Submit ဆိုတာလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ။
11. အဲ့ဒါဆိုတော့ Download အော်တို ကျလာပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုတော့ ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ RAR ဖိုင်ကို ဖြေပြီး ကြည့်လိုက်ပါ အားလုံး ရောက်ရှိနေတာတွေကို တွေ့ရပါပြီး။
တစ်ကယ်လို့ မိမိ Facebook မှာ Massages, Photo, Video , ဖိုင် တင်ထားခဲ့သမျှအားလုံးကို ပြန်ဒေါင်းချင်လည်း ဤ နည်း အတိုင်း ပြန်ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Ko Lin at 8:40:00 PM 0
Ko Lin at 8:37:00 PM 0
Ko Lin at 8:34:00 PM 0
ဖုန်းထဲ့မှာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းနဲ့ နှစ်သက်ရာသီချင်းကို ထည့်သွင်းပြီ Video ပြုလုပ်နိုင်မယ့် 1 Photo Video v1.0 Apk
Ko Lin at 8:27:00 PM 0
Android OS နှင့် Tablet ကိုင်ဆောင်ထားသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မိမိဖုန်းထဲ့မှာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းနဲ့ နှစ်သက်ရာသီချင်းကို ထည့်သွင်းပြီ Video ပြုလုပ်နိုင်မယ့် 1 Photo Video v1.0 Apk လေးပါ။ သင့်ချစ်သူရဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထဲကို Mp3 သီချင်းနဲ့ ရောစပ်ပြီး အလွယ်တကူ ဗီဒီယို ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ နောက်ပြီး သီချင်း Album ရဲ့ Cover ပုံကိုသုံးပြီး အဲ့ဒီ Album ထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းနဲ့ Video လေးလုပ်လို့ ရတာပေါ့။စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နမူနာအနေနဲ့အောက်မှာ Screen Shoot တွေရိုက်ပြထားပါတယ် ။Android OS Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိထားတဲ့ဖုန်းတွေပေါ်မှာ Installလုပ်၍အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံတွေပေါ်မှာ မီးတောက်ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ နှင့်စက်ရုပ်တွေ အဖြစ် ဓာတ်ပုံတွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ့် Effect Creator Pro v1.0 Apk
Ko Lin at 8:22:00 PM 0
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် မိမိဓာတ်ပုံတွေပေါ်မှာ မီးတောက်ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ နှင့် စက်ရုပ်တွေ အဖြစ်ဓာတ်ပုံတွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ့် Effect Creator Pro v1.0 Apk လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။ ရိုက်ပီးသာ ပုံတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ရတာ လွယ်သလို့ တစ်ခါတည်း ရိုက်ပီး Camera ပေါ်မှာလည်း လိုချင်တဲ့ မီးတောက်ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ နှင့် စက်ရုပ်တွေ အဖြစ်ဓာတ်ပုံတွေကို အလွယ်ဆုံး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Application ကောင်းလေး တစ်ခုပါဗျာ။
မိမိ ဓာတ်ပုံနှင့် Mp3 သီချင်း ထည့်ပြီး ဗီဒီယို Show တွေကို အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Photo Video Maker with Music Apk
Ko Lin at 8:16:00 PM 0
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် ဖုန်းထဲ့က မိမိ ဓာတ်ပုံနှင့် Mp3 သီချင်း ထည့်ပြီး ဗီဒီယို Show တွေကို အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Photo Video Maker with Music Apk လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက Video Editor, Photo Slide Show Maker
Photo to Video Converter, Projector Slide Show, Slide Show Maker
Movie Maker, Video Maker အားလုံးကို အလွယ်ဆုံး ပြုလုပ်နိုင်ပြီး။ ဖုန်းနှင့် Video Editor တည်းဖြတ် ဝါသနာ သူငယ်ချင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးသော Application လေး တစ်ခုပါဗျာ။
Ko Lin at 8:11:00 PM 0
ဘောလုံးဂိမ်း ချစ်သူများအတွက် PES 2016 အရည်အရည် ကောင်းလွန်တဲ့ HD ဂိမ်း လူကြိုက်များတဲ့
PES 2016 ဂိမ်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ PES Football
ဂိမ်းတွေကတော့ ကစားရတဲ့အပိုင်းမှာ ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်
တာတွေ့ရပါတယ်။ ဆော့ကစားသူတွေလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသား PES 2016 Game
လေးတစ်ခုပါ။ ကဲ ဆော့ကစားလိုသူတွေ ဒေါင်းယူပြီး အမုန်းဆော့ ကစားနိုင်ပါပြီဗျာ။
Download From Here Apk
Download Apk+( Data ) 194.11 MB
Ko Lin at 7:38:00 PM 0
နာမည်﻿ကြီး ဇာတ်﻿ကား﻿တွေကိုကြည့်﻿နိုင်ဒေါင်းနိုင်တဲ့ - Show Box 4.61 APK
AK MOBILE NETWORK at 4:56:00 PM 0
Android /Tablet ကိုင်ဆောင်ကာ Show Box 4.61 APK အသုံးပြုသူများအတွက် 31 ရက်နေ့3လပိုင်းက Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ ဖုန်းထဲကနေ English Movie များဒေါင်းယူနိုင်တယ် ကြည့်ရှု့ နိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ လေးပါ။ အင်္ဂလိပ်​ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားများကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေ အတွက်​ ဟိုဆိုဒ်ဝင်​ ဒီ ဆိုဒ်ဝင်​လိုက်ရှာစရာမလိုပဲ တစ်နေရာတည်းမှာတင်​ဖုန်းထဲက ကိုယ်​ကြည့်ချင်တဲ့ ဇတ်ကား ကို ​ရွေးဒေါင်းလိုက်​ရုံပါပဲ။ တော်တော်​လေးအဆင်ပြေပါတယ် ​ဒေါင်းယူနည်းကို​အောက်မှာ
ပုံ​တွေနဲ့ပြထားပေးပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 45 MB ရှိပြီး Android Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းများမှာထည့်သွင်း install လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လမ်းသွားရင်း ထောင်ချောက်ထဲ ရောက်မသွားစေဖို့ - Waze 4.0.1.1 APK
AK MOBILE NETWORK at 4:54:00 PM 0
Android /Tablet ကိုင်ဆောင်ကာ Waze 4.0.1.1 APK အသုံးပြုသူများအတွက် 31 ရက်နေ့3လပိုင်းက Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိ ကားနဲ့ ခရီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာ ကားကြပ်မကြပ် , ကားတိုက်မှူရှိမရှိ , ကားလမ်း ဘလော့ရှိမရှိသိရှိပေးနိုင်မယ့် App လေးပါ ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 45 MB ရှိပြီး Android Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းများမှာထည့်သွင်း install လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Blog Archive January (1) December (10) October (5) September (3) August (14) July (13) June (18) May (80) April (47) March (13) February (5) January (18) December (40) November (18) October (3) September (11) August (20) July (41) June (41) May (23) April (20) March (22) February (23) January (28) December (21) November (54) October (58) September (71) August (108) July (181) June (146) May (136) April (289) March (234) February (227) January (154) December (90) November (107) October (105) September (90) August (146) July (119) June (96) May (158) April (89) March (114) February (192) January (156) December (154) November (133) October (87) September (57) August (78) July (73) June (61) May (48) April (49) March (78) February (292) January (130) December (124) November (117) October (153) September (240) August (178) July (149) June (136) May (141) April (112) March (97) February (149) January (93) December (39) November (11) October (46) September (13) August (4) May (2) April (3)